Adobe XD waxaa loo cusbooneysiiyay si weyn 'Stacks' iyo warar kale | Abuurista khadka tooska ah
Adobe XD waxaa lagu cusbooneysiiyay 'Stacks', astaamaha qaabeynta, kooxaha duubista iyo waxyaabo kale oo badan
Manuel Ramirez | | CSS, Qalabka Naqshadeynta, HTML, dhowr
Adobe XD waxaa lagu cusbooneysiiyay waxyaabo dhowr ah taas oo xoogga saareysa habab cusub oo loo qaabeeyo, u qaabeeya iyo iskaashi. Taxane ah astaamo cusub oo lagu qodbi karo 'Xirmooyinka', astaamaha naqshadeynta iyo kooxaha duuba.
Laakiin waxyaabo badan ayaa jira u qaado naqshadeynta websaydhka heer kale laga bilaabo codsigan weyn ee loo yaqaan Adobe XD. Hadda waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad ogaatid qaar ka mid ah faahfaahinta noocyadan cusub.
Waxaan marka hore ka soo aruurineynaa wararkaan cusbooneysiinta kale Photoshop, muujiye ama isku mid Lightroom. Xirmooyinka waa hab cusub oo loola shaqeeyo kooxaha iyo qaybaha. Waan awoodnay ku ekaysiiso Flexbox ee CSS, iyadoo la leeyahay Isku-xirku waa tiirar ama safafka walxaha oo meel u dhexeysa la dhigey. Maaddaama walxaha ku jira Stack lagu daro, la tirtiro, dib loo habeeyo ama wax laga beddelo, walxaha intiisa kale si toos ah ayey isu hagaajinayaan, iyagoo ilaalinaya "bannaan".
Markay "isdabajoogga" la abuuro, XD wuxuu ogaadaa jihada, mid toosan ama mid toosan. Ujeedada xirmooyinka ayaa ah in la samayn karo aad uga sii fudud si khafiifinta walxaha ku jira UI sida kaararka, hoos u dhaca, daalacashada iyo moodeellada. Si kale haddii loo dhigo, wax walba hadda waa kuwo "dabacsan" ku jira XD markaan naqshadayno.
Kooxaha "Wareeg" ayaa taas hela noocyadayagu waxay u dhaqmaan sidii degello iyo barnaamijyo wax soo saar ah. Cusub cusub oo ay codsadeen bulshada XD quudinta, liisaska, wiishashka, galleeliyeyaasha iyo waxyaabo kale oo badan. U fiirso fiidiyaha si aad toos ugu daawato:
Waxaan sidoo kale leenahay naqshadeynta astaamaha taas oo iyadu ah hab cusub oo loo wada shaqeeyo loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo horumariyeyaasha. Magacyo qaas ah ayaa hadda lagu dari karaa dabeecadaha iyo qaababka midabka ee hantida hantida waxaana lagu daabici karaa diyaarinta-soo-dejinta CSS. Aynu nidhaahno astaamaha naqshadeynta ayaa ah hab tixraac fudud oo lagu sameeyo go'aannada qaabeynta muuqaalka ah. Fiidiyow kale oo aad u aragto sida ay u shaqeyso:
Cusboonaysiinta cusub ee waxtarka leh u leh Adobe XD wuxuu hagaajiyay isdhexgalka Slack, Iskuxirayaasha la wadaagi karo ee la isku habeyn karo iyo muuqaalka xogta leh Jaantus loogu talagalay XD,
Dhamaan mid cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay Adobe XD iyo inaad soo dejiso hadda si aad u tijaabiso oo aad u hagaajiso socodkaaga shaqada markaad naqshadeynayso bogagga internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » HTML » Adobe XD waxaa lagu cusbooneysiiyay 'Stacks', astaamaha qaabeynta, kooxaha duubista iyo waxyaabo kale oo badan
Guryo koronto leh oo ay ka buuxaan hal-abuur ay farshaxan kastaa jeclaan lahaa inuu helo
Adobe's Lightroom waxaa lagu cusbooneysiiyaa wadaagista waxka beddelka, xakameynta weyn ee wax ka beddelka, iyo waxyaabo kaloo badan